Io no fanambaran’ny zandary miandraikitra ny vaovao sy ny seraseran’ny zandariamariam-pirenena, ny Komanda Herilalatiana Andrianarisaona. Tsy ela izay dia nahitana vaky fasana roa tao Morarano, Talatavolonondry ka razana 231 no tsy hita popoka tamin’izany. Araka ny angom-baovaon’ny zandary tany an-toerana, efa ela no nisy nandroba ireo fasana ireo.
MANOHINTOHINA NY FILAMINAM-BAHOAKA
Samborina noho ny fandikan-dalàna ireo mpamaky fasana sy mpangalatra taolam-paty. Ankoatra izay, anisan’ny hanenjehana ireo mpanao trafikana taolam-paty ny fanohintohinana ny fitsipi-pitondrantena sy ny moraly. Heverina ho manimbazimba ny maty sy ny zon’ireo efa nodimandry ny vaky fasana. Voantohintohina ihany koa ny fisainana sy ny filaminam-bahoaka. «Misy lalàna mahakasika azy manokana matoa henjehina fa tsy samborina fahatany ny olona iray tahaka ireo mpamaky fasana. Manaraka ny zotran’ny fanadihadiana sy ny fitsarana ary ny sazy mifanandrify amin’izany ireo tratra namaky fasana sy mikirakira taolam-paty», hoy ny mpiandraikitra ny serasera sy ny vaovaon’ny polisim-pirenena, ny Kaomisera Haja Andriamanalina. Mbola mipetraka ho baraingo hatreto ny resabe mandeha fa aondrana any ivelan’i Madagasikara ny taolam-paty na entina hanondranana entana izay «tsy hitan’ny fitarafana na «scanner». Raha ny tolom-bahoaka 1991 io asa ratsy io no nipoitra tany amin’ny faritra Alaotra izay lazaina fa be kalsiôma ny taolan’ny sihanaka noho izy ireo voky trondro. Nitatra manerana ny Nosy anefa izany.